Yealink UVC20, iqabane elilungileyo ekusebenzeni ngomnxeba [Ukuphonononga] | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 08/06/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 29/05/2021 13:57 | elektroniki, ngokubanzi, Reviews
Umsebenzi wefowuni ufikile kwaye kubonakala ngathi uhlala uhleli. Kukho iinkomfa ezingakumbi nangakumbi, iintetho okanye iintlanganiso esizenza ngocingo ngokwamaqela, i-Skype, i-Zoom okanye nayiphi na enye indlela ekhoyo kwintengiso. Nangona kunjalo, kungale mizuzu xa siqwalasele ukuba mhlawumbi ikhamera yewebhu kunye nemakrofoni yekhompyuter yakho bezingalunganga ...
Kuyimfuneko ukuphucula ukusebenza kwekhamera kunye nemakrofoni yethu ukuba sifuna ukufumana iziphumo ezilungileyo, kwaye koku sinezisombululo ezikrelekrele. Sijonga ngokunzulu kwi-webcam ye-Yealink ye-UVC20, iqabane elifanelekileyo leentlanganiso zamaqela kaMicrosoft nokunye okuninzi.
3 Sebenzisa amava
Kule meko, ngaphandle koluvo lokuba ukupakisha, inyani kukuba imveliso izuzwe kakuhle. Yenziwe ngeplastiki phantse yonke, sineglasi / i-methacrylate yokumboza ngaphambili kuyo yonke into eyinika ukuziva okuhle kwepremiyamu. Inzwa kwindawo engaphambili inokubaluleka konke ngelixa umngxunya wombhobho ubekwe kwicala lasekunene nakwesobunxele i-LED ebonisa imeko yesixhobo. Siyaqhubeka ubuncinci ngenkqubo yokuvalwa kwelensi evumela ukuba sifumane ubumfihlo.
Imilinganiselo: 100mm x 43mm x 41mm
Ngokwenxalenye yayo, sinesiseko esine-hinge system esenza ukuba le khamera ibe yinkqubo ephantse yafumaneka kwindalo yonke kwaye ifumaneke ngokupheleleyo kuzo zonke iimonitha kunye neelaptops, nokuba sinqwenela ukuba sithathe ithuba ngentambo yendalo yonke kathathu kwisiseko, okanye siyonwabele Inkqubo esivumela ukuba siyishiye ngokuthe ngqo etafileni. Zininzi iindlela esinokusinika zona, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba ikhamera iyakwazi ukuzitshintsha ngokuthe nkqo nangokuthe tye. Ukungafani kwiflegi kule khamera yewebhu ngemakrofoni eyakhelweyo.
Siza kuyonwabela ikhamera yewebhu ngale Yealink UVC20 enikezela uluhlu lwe-autofocus oluphakathi kweesentimitha ezili-10 kunye neemitha eziyi-1,5. Sinentambo ngasemva I-USB 2.0 2,8 Iimitha eziya kuba ngaphezulu ngokwaneleyo kuzo zonke iindawo. Nangona kunjalo, lixesha lokuba sigxile kwi-sensor yakho, sinemodeli I-5 MP ye-CMOS ene-f / 2.0 ukuvula Iyakwazi ukubonelela ngemveliso yevidiyo kwisisombululo se-1080p FHD kwi-30FPS njengowona mthamo mkhulu. Iziphumo ezifanelekileyo ine-autofocus esebenza kakuhle kwaye inamandla okuguqula ulungelelwaniso kunye nokukhanya.
Isixhobo siya kuhambelana IWindows kunye neMacOS ngaphandle kwengxaki. Kwinxalenye yayo, Imakrofoni i-omni-yecala kwaye iya kuba ne-SNR ephezulu ye-39 dB. Isantya sokuphendula, ewe, siqinile phakathi kwe-100 Hz kunye ne-12 kHZ, iziphumo ezilondolozayo. Asifumananga ngxaki kubuchule bezobuchwephesha, enyanisweni singathi simangalisiwe sisakhono seYealink UVC20 yokubonelela ngeziphumo ezilungileyo nokuba zineengxaki zokukhanyisa ezibonakalayo kwindawo yokubanjwa.
Ikhamera ine-plug-and-play ngokupheleleyo, Oku kuthetha ukuba ngekhe senze naluphi na uhlobo loqwalaselo ngaphambi kokusetyenziswa kwayo, inyani yokuba asinayo nesoftware enokukhutshelwa le njongo ingqina oku. Nje ukuba sixhume ikhamera ye-Yealink UVC20 ngezibuko le-USB, siyifumana phakathi kwemithombo yeaudiyo nevidiyo xa sisenza iminxeba yevidiyo ngeenkqubo ezahlukeneyo zale njongo. Kule meko siya kufumana ikhamera kunye nemakrofoni yekhamera ngokwayo ngokwahlukeneyo, esivumela ukuba sisebenzise ii-microphone zethu ukuba sinqwenela.
Kutshanje sisebenzise ikhamera ukurekhoda iPodcast yeveki yamaqabane e-iPhone yangoku kwaye uyayibona kwividiyo efakwe ngaphakathi. Le yeyona ndlela ifanelekileyo yokubona ukusebenza kwekhamera ngokubanzi, nangona kunjalo, kule meko sisebenzise omnye umthombo wesandi. Ikhamera ine-autofocus ekhawulezayo, endothusayo nakwimeko zokukhanya ezingekho mgangathweni, kwaye le yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo, inyani yokuba ne-autofocus izakusivumela ukuba sihambe phambi kwayo ngaphandle kwengxaki le migaqo.
Ikhamera ayibizi kakhulu, kwaye eyona ngxaki inkulu endiye ndadibana nayo kukuba ayidweliswanga njengemveliso ekhoyo eAmazon. Ungayifumana kwiiwebhusayithi ezinje Ukujonga ngokuthe ngqo kwixabiso elicetyiswayo lama-euro angama-89,95, Ukuthathela ingqalelo ukuba iyimveliso eqinisekisiweyo yeeMicrosoft Teams kunye ne-Zoom, ayibonakali ngathi ininzi.
Ukusebenza yinto umntu anokuyilindela kwimveliso enalezi mpawu, kwenzeka into efanayo ngokungafaniyo okukhulu kwesiseko sayo kunye nophuhliso olusebenzayo lokujolisa ngokuzenzekelayo kuzo zonke iifowuni zevidiyo, ngaphandle kwamathandabuzo Imveliso esinokuyicebisa ukuba ujonge ukuphucula intetho yakho.
Ithunyelwe nge: 8 Juni ka 2021
Utshintsho lokugqibela: Meyi 29 ye2021
Uqwalaselo / Sebenzisa
Uyilo kunye nezinto ezizivayo "njengeprimiyamu"
Isiseko esisetyenziswa kakhulu kwaye kulula ukusisebenzisa
Iziphumo ezilungileyo kakhulu zekhamera kunye ne-autofocus
Ndikhumbula iadaptha ye-USB-C
Ambalwa kakhulu amanqaku athengiswayo eSpain
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Yealink UVC20, iqabane elilungileyo ekusebenzeni ngomnxeba [Ukuphonononga]